एक्लै भएको बेला हर्टअट्याक भए के गर्ने ? जानी राखौँ – Etajakhabar
एक्लै भएको बेला हर्टअट्याक भए के गर्ने ? जानी राखौँ
ताजा खबर :- विश्वमा हर्टअट्याकका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । हर्टअट्याकले धनी, गरिव उमेर केही पनि भन्दैन । हर्टअट्याक यो समय र यति बजे आउँदैछुँ भनेर कहिल्यै भन्दैन , यो जुनसुकै बेला जहाँ पनि आउन सक्छ । । तर हर्टअट्याक हुनासाथ के गर्ने भन्ने उपायका बारेमा जानकारी भएमा यो समस्यालाइ केही समाधान गर्न भने सकिन्छ । हर्टअट्याक पूर्व जानकारी अर्थात घोषणा गरेर आउने समस्या होइन । हर्टअटयाक आउँदा मानिसहरुले यसबाट बच्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । ।
यदि तपाईलाई आफ्नो मुटुको चालमा अचानक अनावश्यक परिवर्तन अर्थात गलत संकेतको अनुभव भयो र आफू बेहोस हुँन्छु जस्तो महसुस भयो भने, त्यस बखत तपाईसँग होश गुमाउनुपूर्व जम्मा दश सेकेन्डको समय रहन्छ । तर धेरै मानिसहरुलाई यस्तो बेला आफैले आफ्नो उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । यसका लागि आफू आत्तिनु र हडबडाउनु हुँदैन ।
आफू बेहोश हुनबाट जोगिनु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सकेसम्म खोकिराख्नु पर्छ । खोक्नु भन्दा पहिले ठूलो स्वाश लिनुपर्छ । गहिरो र लामो समयसम्म खोक्नुपर्छ । यसरी खोक्नुहोस् ताकि तपाई आफ्नो फोक्सोमा जमेको थुक, खकार तथा अन्य केही कुरालाई बाहिर फाल्न चाहँदै हुनुहुन्छ ।
प्रत्येक २ सेकेण्ड नबिराइकन श्वास लिनुपर्छ र खोक्नुपर्छ । यो प्रक्रिया डाक्टर नआए सम्म वा मुटुको धड्कन सामान्य नभएसम्म जारी राख्नुपर्छ । गहिरो श्वास लिंदा अक्सिजन फोक्सो भित्र प्रबेश गर्छ र खोक्ने कार्यले एक प्रकारको दबाब पैदा गर्छ । यसले तपाईको मुटु र रगत संचारको गतिमा नियमितता ल्याउँछ । यस प्रकारको दबाबले तपाईको मुटुको धडकनको गतिलाई ब्यालेन्समा ल्याउन मद्धत पुर्याउँछ।
डाक्टर नआइपुगुनजेल सम्मका लागि यो एकदमै भरपर्दो उपाय हो जसले तपाइलाई थप नोक्सानी हुन दिंदैन । तसर्थ, संभव भए सम्म यो उपाय धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुसम्म पुर्याउनुहोस् । तपाईको सानो सहयोगले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ । मुटुरोग बिशेषज्ञहरु ढुक्कका साथ भन्छन्, “यदि एक जनाले यो उपाय दश जना सम्म पुर्याएको खण्डमा, कमसेकम एक जनाको ज्यान बचाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र २५, २०७३ समय: १६:२३:५७
ल्वाङ चिया पिउनुस् फाइदा उठाउनुस्
डा. केसीको मुटुको चालमा समस्या, स्वास्थ्य अवस्था गए रातिबाट अचानक थप जटिल